MURAN MINDHICIREED: Maxaadan ogayn oo laacibiinta Juventus dhex maray habeenkii Cardiff (Qaybtii 1-aad) – Gool FM
MURAN MINDHICIREED: Maxaadan ogayn oo laacibiinta Juventus dhex maray habeenkii Cardiff (Qaybtii 1-aad)
Raage July 15, 2017
(Cardiff) 15 Luulyo 2017 – Waxaa soo baxaya war aan caadi ahayn oo ku saabsan wixii ka dhacay qolka lebiska Juventus oo dhamaystiran gaar ahaan habeenkii Champions League Final, gaar ahaan arrin dagaal dhex maray Leonardo Bonucci iyo Dani Alves, taasoo laga soo weriyay Mario Mandzukic.
Waxaa jirey warar soo baxayay oo sheegayay inuu dhamaadk CL ee Cardiff uu muran dhex maray Bonucci iyo Paulo Dybala, taasoo uu inkirey qof kasta, balse dhacdadaas oo la sheegay inay dhacday xilligii biririfta ayaa u muuqata mid rumoobaysa.
Warka ayaa markii hore kasoo baxay ilo Serbian ah, balse haatan wuxuu kasoo baxayaa dhanka Talyaaniga, waloow uusan qaybtan ku lug lahayn Dybala.
“Waxaan doonayaa inaan soo fara geliyo aamusnaanta wararkan la isla dhexmarayo ee ku saabsan jawi foolxun oo ka dhacay gudaha qolka lebiska Juve,” ayuu Mandzukic u sheegay weriye Serbian ah oo la yiraahdo Darko Meznovic, via spaziomilan.it.
“Waxay arrintu dhexmartay Bonucci iyo Dani Alves oo qalalaase abuuray, nasiib wanaag, maaddaama la iibiyay haatan wax kasta caadi ayay kusoo noqonayaan.
“Waa iyaga kuwa murmay intii ay socotey ciyaartii Final-ka waxaana ugu wacan iyagoo leh shakhsiyado is diiddan. Leo iyo Dani mar kasta ayay murmaan, maalintii Final-kana, waxaan daawannay daraama kale oo ka mid ah dooddooda.
GOOGOOSKA & SAWIRRADA: Western Sydney Wanderers vs Arsenal 1-3 (Giroud oo wadaro dhigay)
Kaddib tijaabadii Leonardo Bonucci iyo Lucas Biglia oo gaarey xerada tababarka Milanello + Sawirro & Muuqaal